खेल - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
मारिसा पोनिचबाट प्रशंसापत्र
महिला साबेर फेंसिंग - राष्ट्रीय टीम
एडमन्टन, एबी क्यानाडा
मैले प्रयोग गर्न सुरु गरें डेभिड प्रसन्न २०१ sports/१fबाड़ दिने मौसमको बखत मेरो खेल मनोवैज्ञानिकको सिफारिस पछि। मैले पहिले नै मेरो खेल मनोवैज्ञानिकको साथ केही बायोफिडब्याक र न्यूरोफिडब्याक गरिरहेको थिएँ, तर मेरो सत्रहरूको बीचमा "मेरो दिमागलाई तालिम दिन" सक्षम हुनु ठूलो छ। मैले मेरो समग्र फेंसिंगमा ठूलो सुधार देखेको छु। म मुख्य रूपमा ब्रेन बूस्टर सत्रहरू प्रयोग गर्दछु। आवश्यक परेमा, म कहिलेकाँही स्लीप सत्रहरू वा मेडिटेट सत्रहरू प्रयोग गर्दछु। एक प्रमुख प्रतिस्पर्धा अघिल्लो रात, म सँधै ब्रेन बूस्टर फंक्शन प्रयोग गर्ने छु र मैले याद गरे कि म निश्चित रूपमा बढी केन्द्रित छु र म प्रतिस्पर्धा गर्दा "जोनमा" जान सजिलो हुन्छ। प्रणाली संक्षिप्त र को साथ यात्रा गर्न को लागी धेरै सजिलो छ।
AVE को प्रयोग गरेर, मैले याद गरे कि म फेंसिंग र मेरो व्यक्तिगत जीवन दुवैमा बढी केन्द्रित र विश्वस्त छु। म चिन्ता र तनाव भन्दा पहिले मलाई भन्दा कम। मैले यो पनि थाहा पाएँ कि यसले मेरो सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। मलाई सुत्दा समस्या भएको थियो, तर अब मलाई रातको निदाउनमा बिरलै समस्या हुन्छ।
म २०१ 2016 रियो ओलम्पिकको लागि क्वालिफाइ गर्ने निकट नजिक थिएँ। मैले प्रयोग गर्दा बितेको मौसममा सुधारको मात्रा मैले देखेको छु डेभिड प्रसन्न मलाई देखाउन गएको छ कि म अब रोक्न सक्दिन। मेरो लक्ष्य २०२० टोकियो ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्नु हो र म विश्वस्त छु कि म सफल हुनेछु। डेभिड डिलिट मेरो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दतको लागि एक प्रमुख उपकरण भएको छ, र म यो सिफारिश गर्दछु कि अन्य खेलाडीहरू उनीहरूको खेलको अतिरिक्त किनारमा खोजिरहेका थिए।
पूर्ण प्रशंसापत्र ब्लग पोष्ट
रिक क्रेटीबाट प्रशंसापत्र
CA, संयुक्त राज्य अमेरिका
मेरो नाम रिक क्रेटी हो र म 57 XNUMX बर्षको भएँ। म उत्तरी क्यालिफोर्नियामा र मेरो स्वास्थ्य कार्यक्रमको लागि बस्दछु; म नियमित फिटनेस सेन्टर ल्याप पूलमा पौडी खेल्छु।
भर्खर मैले पहिलो खुला पानी पौडने दौडमा प्रतिस्पर्धा गरें ...। टिबुरन माइल। दौड स्यान फ्रांसिस्को खाडीको बीचमा एन्जिल टापुबाट फिर्ता टिबुरन शहरको हो।
किनकि यो मेरो पहिलो खुला पानीको दौड थियो, मसँग पर्याप्त मात्रामा ट्रिपिडेशन थियो। एसएफ बे एकदम गहन प्रवाहको अधीनमा छ र एकले आशा गरे जस्तै पानी धेरै चिसो छ (मैले चुनौतीलाई उकालो पार्न भिटाको सूट बिना दौड पौडी खेल्ने निर्णय गरें)। त्यहाँ शार्कका कारण थोरै चिन्ता जोडेको छ।
आफैलाई मानसिक रूपले तयार गर्नका लागि, मैले कार्यक्रममा अग्रगामी गर्न धेरै हप्ता सम्म मेरो डेभिड उपकरणको प्रयोग गरें। म सामान्यतया एक ध्यान कार्यक्रम संलग्न गर्दछु, र आराम गर्दा, एक सफल दौडको कल्पना गर्नेछु, यसको मतलब म आफ्नै शक्ति अन्तर्गत समाप्त गर्न सक्षम हुँ र बचाइन र पानीबाट बाहिर फिश हुन सक्दिन! डेभिड एवीई उपकरण प्रयोग गर्नाले मलाई बसोबास गर्न र सकारात्मक परिणामको लागि मेरो अवचेतन प्रोग्राम गर्न अनुमति दियो। म रेस हुनु भन्दा पहिले एकदमै शान्त थिएँ तर एक पटक मैले water० डिग्री पानीमा हिर्काएपछि एड्रेनालाईनले ओगट्यो र केहि समयको लागि, म सिन्कबाट बाहिर भएँ। त्यो भावना बित्यो र म विश्वास गर्दछु कि म क्षणमा रहन र नडराउनको लागि सक्षम छु, किनभने मैले मेरो डेभिडसँग अनुभव गरेको गहिरो कार्यक्रमको कारण हो।
संलग्न तस्वीर मेरो पोस्ट रेस को हो। यो मेरो अद्भुत पत्नी जिल द्वारा लिइएको थियो। म नतिजा संग खुशी थिए र मेरो उपलब्धि को भावना को भारी थियो। जब म त्यस दिन पछि घरमा पुगेँ, म फेरि ओछ्यानमा पल्टें, मेरो डेभिडमा स्ट्र्याप भयो, र एउटा कार्यक्रम चलाएँ जब म पूरै घटनालाई पुनर्जीवित पार्दैछु मेरो विचारमा र गहिरो अवचेतनमा गहिरो लंगर राख्न ... किनकि मेरो अर्को खुला पानी पौंडी खेल्ने दौड जुन म तयारी गर्दैछु अलकाट्राजदेखि सान फ्रान्सिस्को वाटरफ्रन्टको दौड हुनेछ!
CHEERS र धन्यवाद MINDALIVE सहयोगको लागि!
क्याथरीन गार्साउबाट प्रशंसापत्र
ओलम्पिक कांस्य पदक - सिडनी २०००
"पानी बाहिर पौडी खेल्ने लेखक
अप्रिल 27, 2012
डेभिड प्रयोग गर्दै प्रसन्नता प्रो मेरो लागि एकदम अप्रत्याशित शान्त र रूपान्तरणको अनुभव थियो। मेरो भावनात्मक खान र उदासीपनबाट निको हुन खोज्ने क्रममा मैले यस्तो कमै समयमा यस्तो स्पष्ट नतिजा ल्याउने मोडिलिटी फेला पारे। डिभाईसको बिभिन्न सेटिंग्समा प्रयोगको केवल cal दिन (रातमा शान्त र उत्साहित हुँदै र शुरुको दिनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै), मैले महसुस गरेको सकारात्मक भिन्नता आश्चर्यजनक थियो!
वर्षौंदेखि, मैले मेरो अनियन्त्रित खानाहरूका लागि धेरै अन्तर्निहित शारीरिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक कारणहरूलाई सम्बोधन गरेको छु। यद्यपि अझै पनि मैले त्यस्तो समयको अनुभव गरिरहें जहाँ खानेकुरा र उदासीले मलाई नबुझ्ने वा शान्त हुन सक्ने तरिकाहरूबाट उत्पन्न भयो। मेरो दिमागलाई सन्तुलनमा राख्ने डेभिड डाइलाइट प्रो तरिकाले यस तनावलाई जारी गर्न मद्दत पुर्‍यायो र मेरा दिनको बारेमा जान सक्ने सहजताको आधार सिर्जना गर्‍यो। मेरो खाना अनुभव स्वाभाविक रूपमा अझ सामान्य देख्न को अलावा, म चाँडै बढी ध्यान केन्द्रित र संगठित महसुस, जो निश्चित रूप मा मेरो समग्र सहज र आत्मविश्वास को भावना बढाएको छ।
धेरै वर्षदेखि खाना, भावनाहरू, र जीवनको लागि शरीर / दिमागको सम्बन्धको अध्ययन गरिसकेपछि, यो अचम्म मान्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन कि दिमागका छालहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने केन्द्रमा राखिएको टेक्नोलोजीले राम्रोसँग खाने स्वस्थ जीवनशैलीको साथ संयोजनको रूपमा कसैलाई पनि प्रभाव पार्छ, व्यायाम, र जीवन प्रेरणा कि आत्मा प्रेरणा।
म डेभिड डेलाइट प्रो प्रयोग गर्न जारी राख्न धेरै उत्साहित छु - मेरो मस्तिष्कको विभिन्न मस्तिष्क तरंग राज्यहरूमा सर्नको क्षमता वृद्धि गर्न, मेरो ध्यान अभ्यास गहन बनाउन, तनाव घटाउने, लचिलोपना बढाउन, र मेरो बढ्दो गतिशील स्वास्थ्यलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो उपकरणको रूपमा।
डेव र टीमलाई धन्यवाद मन जिउँदो। म डेभिड डिलिटा प्रो सिफारिस गर्न उत्साहित छु सबै महिलाहरुलाई जसले मलाई मन पराउँछन्, खाना र बाध्यता र भावनात्मक खानबाट स्वतन्त्र हुन चाहने र योग्य छन्। मेरो एथलेटिक क्यारियरको दौडान मैले कसरी फाइदा लिन सक्छु भन्ने कुराको समक्ष, हरेक गम्भीर खेलाडीहरूले यो प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्छ। माथिको सबै उल्लेखहरू र प्रदर्शनमा दृश्यता र सटीक वृद्धि गर्न, कुनै पनि खेलमा थप्नको लागि एकदम मानसिक धार!
सबैको लागि ठूलो स्वास्थ्य र कल्याणको कामना गर्दै,
जोन पर्नाबाट प्रशंसापत्र
पीजीए टूर प्लेयरको आकांक्षा
अप्रिल 16, 2007
"मैले डेभिड PAL36 जस्तो पूर्ण रूपमा कहिले पनि अनुभव गरिन CES। एक २० मिनेट सत्र पछि, मैले अत्यन्तै शान्तिको अनुभव गरे र फोकसको अर्थ के हो भनेर सिके। मेरो पहिलो प्रयोग पछि, म मेरो सबैभन्दा कम गोल र मेरो घर कोर्स मा 20 66 को कोर्स रेकर्ड शूट। ”
टिम एडम्सबाट प्रशंसापत्र,
शक्ति र कन्डिसन कोच,
ओकल्यान्ड राइडर्स NFL फुटबल टीम
ओकल्याण्ड, क्यालिफोर्निया, अमेरिका
जनवरी 31, 2004
“म यस टेक्नोलोजीमा पूर्ण विश्वास गर्दछु र मलाई लाग्छ यदि कोही आफ्नो प्रदर्शनमा सुधार गर्न चाहान्छन्, उनीहरूको सम्भावनालाई छोडिदिनुहोस् भने उनीहरूले यस प्रविधिको प्रयोग गर्ने र डेभको अन्तरदृष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कुरामा विचार गर्नेछन्! मैले अरू कुनै माध्यमहरू फेला परेको छैन जुन एक व्यक्तिको भावनात्मक र शारीरिक स्थिति नियन्त्रण गर्न को लागी DAVID पाराडाइज गर्न सक्ने सीधा असर गर्न सक्दछ। तत्काल शारीरिक र मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया उल्लेखनीय छ! "
म्याट निकोलबाट प्रशंसापत्र
प्रमुख शक्ति र कन्डिसन कोच,
टोरन्टो मेपल NHL हकी क्लब पत्ता
डिसेम्बर 8, 2003
"एक पेशेवर शक्ति र कन्डिसन कोचको रूपमा म सधै मेरा एथलीटहरूको प्रदर्शन सुधार गर्ने नयाँ विधिहरूको खोजी गर्दछु। मलाई भर्खरै डेभिड प्याराडाईज ब्रेन इन्ट्रेमेन्ट सिस्टममा क्षेत्रका एक सहकर्मीले परिचय गराएको थियो र म उडाियो!
मैले यस उत्पादनलाई पूर्व प्रतिस्पर्धा न्युरो उत्तेजनाको लागि र प्रतिस्पर्धी बाउट्स र परिणामहरू बीचको रमाईलोको लागि प्रयोग गरेको छु र प्रभावशाली छ। मैले यस उत्पादनलाई आफैं पनि मेरो निद्रालाई बृद्धि गर्न प्रयोग गरेको छु किनकि हाम्रो निरन्तर यात्राले शरीरको सर्कडियन ताललाई अवरोध पुर्‍याउन सक्छ र नियमित निद्रा चक्र बाधित गर्न सक्दछ।
मलाई लाग्छ कि "मस्तिष्क प्रशिक्षण" खेलकुदमा प्रदर्शन वृद्धिको अर्को ठूलो फ्रन्टियर हुनेछ र म डेभिड सीभर र डेभिड प्याराडाइजको सहयोगमा मेरा एथलीटहरू कडा किनारमा हुनेछु भन्ने महसुस गर्दछु। म यस उपकरणलाई अत्यन्तै सिफारिस गर्दछु कुनै पनि एथलीटलाई जो प्रदर्शन र स्वास्थ्य सुधारको क्षमताको बारेमा गम्भीर छ। "
जय पोसेन्टेबाट प्रशंसापत्र
क्यालगरी, अल्बर्टा, क्यानाडा
जुन 3, 1998
“म गत बर्षमा डेभिड प्याराडाइज एक्सएल अडियो-भिजुअल इन्टरमेन्ट (AVE) उपकरण प्रयोग गर्दैछु, दुबै अन्य रेस कार चालकहरूसँग कोचिंग उपकरणको रूपमा, र आफैमा। मेरो स्वर्गले सम्पूर्ण उत्तर अमेरिकामा यात्रा गर्‍यो र हरेक प्रकारको दुर्व्यवहारको अधीनमा थियो जुन दैनिक यात्राले बाहिर निकाल्न सक्छ, र यसले कहिले पनि हराउँदैन। म यस्तो उच्च गुणस्तर, भरपर्दो उत्पादन बजारमा ल्याउनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र प्रशिक्षण र उत्पादन समर्थन को उदार राशि को लागी तपाइँ आपूर्ति गर्न जारी छ।
उपकरणको लागि हाम्रो प्राथमिक प्रयोग विभिन्न अन-ट्र्याक रेसि situations अवस्थाहरूमा इन्टर्बल रिफ्लेक्स प्रतिक्रियाहरू एch्कर गर्नको लागि डिजाइन गरिएको रेकर्ड स्क्रिप्टहरू वृद्धि गर्न हो। जबकि हामीले गत वर्ष कुनै पनि अनुभविक डेटा स driver्कलन गरेनौं ड्राइभरको प्रदर्शन तुलना ईन्टरमेन्ट प्रोग्रामको अघि र पछिको पछि, म त्यहाँ कुनै शंका छ कि त्यहाँ उल्लेखनीय सुधार भएको थियो।
प्रमोदवनको साथ प्रशिक्षणको एक चाखलाग्दो पक्ष फाइदा यो हो कि यसले अन्यथा بورिंग मानसिक कार्यलाई धेरै चाखलाग्दो बनायो। मेरो रोस्टर मा सबैभन्दा unmotivated चालक पनि सामान्य काम नगर्ने मानसिक काम गर्न को एक अर्थपूर्ण समय खर्च।
म अर्को सिजनमा हाम्रो AVE प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास गर्न जारी राख्न जाँदैछु, र तपाईंलाई कुनै पनि चाखलाग्दो घटनाक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। ”
होली Gerke बाट प्रशंसापत्र
जनवरी 7, 1997
“केवल एक छोटो नोट तपाईंलाई बताउनको लागि मैले DAVID प्रयोग गर्ने अवसरको कदर गरेको कत्ति गत बर्ष '96 Olymp ओलम्पिकको तयारीका लागि।
DAVID ले मलाई दौड योजनामा ​​ध्यान केन्द्रित गर्न र प्रतिस्पर्धा भन्दा पहिले आराम गर्न मद्दत गर्‍यो। तपाईंसँग भेट गर्नु अघि र तपाईंको उत्पादनसँग परिचय हुनु अघि, मैले आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा अघि कम्मर कसेर, तनावग्रस्त र नर्भस भएको पाएँ, विशेष गरी प्रमुख घटनाहरू जस्तै रेसवाकको वर्ल्ड कप (१ 1989 1991,, १ 1995 1990 १, १ 1994 1995)), पान अमेरिकन कप रेसवाक (१ 1994 XNUMX ०) , १ XNUMX XNUMX)), पान अमेरिकी खेल (अर्जेन्टिना, १ XNUMX XNUMX)) र राष्ट्रमंडल खेलहरू (१ XNUMX XNUMX))। न केवल यी प्रतियोगिताहरू मार्फत ध्यान केन्द्रित गर्न धेरै गाह्रो थियो, तर प्रत्येक घटनाको लागि परीक्षणहरूले मानसिक तयारी मात्र होइन तर तयारीको लागि पनि उनीहरूको टोल लिइरहेको थियो।
एकचोटि मैले डेभिड प्रयोग गर्न सुरु गरें, प्रतियोगिताहरू मात्र केन्द्रित हुन सजिलो भएन तर प्रशिक्षणमा मेरो कसरतले पनि फाइदा गर्न थाले। म मेरो सबै भन्दा चाखलाग्दो workouts को एक लामो प्रशिक्षण रनको रूपमा सम्झन्छु जहाँ म DAVID प्रयोग गर्थे। तपाईका नवीन र रचनात्मक टेक्नोलोजिष्टहरुलाई धन्यबाद जसले चश्माको कस्टम-सेट बनाउनु भयो जुन मैले प्रशिक्षणको क्रममा देख्न सक्थें। मेरो मुटुको गति दर रह्यो र मेरो गति बढ्यो - प्रमाण छ कि तपाईंको प्रणालीले काम गर्यो!
तपाईको समर्थन र प्रोत्साहनका लागि पुन: धन्यबाद। तपाईंसँग एक अद्वितीय प्रणाली छ जुन म आशा गर्दछु कि मेरो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई हात दिनेछैन! ”
सब्रिना एन्डरसनबाट प्रशंसापत्र
महिला पेशेवर बिलियर्ड संघ टूरि Tour प्रो
जनवरी 17, 1997
“डेभिड प्याराडाइज जूनियरलाई बुबाको उपहारको रूपमा पाउँदा म खुसी छु, ईएसपीएन अल्टिमेट--बल चुनौतीमा भाग लिनु भन्दा पहिले।
मैले अन्तिम १ te टेलिभिजन खेलहरूमा यसलाई बनाएँ। मैले players 16 खेलाडीहरूमध्ये 5th औं स्थानमा रहे। मैले विगतमा मस्तिष्क प्रवेश यन्त्रहरू प्रयोग गरेको छु। मेरो पुरानो असफल पछि केहि महिनाहरूमा, म मेरो खेलको साथ सled्घर्ष गर्दैछु र मेरो श्रेणी २ 48 औंबाट 24२ औँ घट्यो। म अब प्याराडाईस जुनियर संग धेरै उत्साहित छु।
म साँच्चिकै 'In Psych for sports' सत्रको लागि कस्टम प्रोग्रामिंगको आनन्द लिन्छु। यसले भिन्नता ल्यायो। म भविष्यमा अरु धेरै सफलताहरुको प्रतीक्षा गर्दैछु।
ESPN मा मेरो लागि हेरिरहनुहोस्। "
जेनिस म्याक क्याफ्रेबाट प्रशंसापत्र
सेप्टेम्बर 10, 1996
"डेभिड एकाई को उपयोग को लागी धन्यवाद ओलम्पिक को लागी। धेरै रातमा यसले मलाई प्रतिस्पर्धा गर्नु अघि आराम गर्न र मेरो मनलाई दौडबाट रोक्न मद्दत गर्‍यो। सामान्यतया म यस वर्ष प्रतिस्पर्धाको बारेमा अधिक स्थिर र आरामदायी महसुस गर्छु। मलाई विश्वास छ कि एकाई र Hypno-Peripheral टेपले मलाई कसरी रमाइलो तर अझै केन्द्रित दिमागमा आफैंलाई राख्नको लागि मलाई सहायता गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईको समर्थनलाई ठूलो सम्मान गरियो! "
ओलम्पिक स्केटर, क्रिस्टीन Baurais, एक डेविड उत्साही बन्न गई छ!
"म सब भन्दा चाँडो हुँ, म सब भन्दा चाँडो हुँ, म अन्तिम मोड लिदै छु, म भित्र आउँछु!"
क्रिस्टीन बौदराईस क्यानाडाली नेशनल स्पीड स्केटि Team टोलीका सदस्य हुन्, जसलाई १ 1994 3000 Olymp को ओलम्पिकको रजत पदकले ille००० मिटरको स्पीड स्केटिंग प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा लिलीहैमरले गरेका थिए। क्रिस्टीन अब विश्वव्यापी स्केटर मात्र होइन तर यसमा उत्साही विश्वासिलो पनि हो brainwave entrainment.
केहि समय अघि क्रिस्टिन दुखाइको साथ प्रतिस्पर्धाको क्रममा दुर्घटनामा परी घाइते भएको थियो, जब अर्को स्केटरको ब्लेड उनको जांघमा सम्मिलित भयो। त्यस दिन क्रिस्टिनले लगभग आफ्नो जीवन गुमाइन। दर्दनाक चोटपटकको भावनात्मक चोटहरू निको पार्ने प्रयासमा क्रिस्टिनले उपचारको विभिन्न शैलीहरू प्रयोग गरे जसमा फ्लोटेशन बाथ पनि समावेश छ। एक दिन, स्वास्थ्य लाभको क्रममा क्रिष्टिनलाई एक साथीले डेभिड प्याराडाइजमा परिचय गराए। क्रिस्टीनले यो कोशिस गर्‍यो, र त्यो दिनदेखि उनी अ h्कले। अब उनी यो बिना कहिँ जान्छिन!
“अब म यसलाई (डेभिड प्याराडाइज) दिनमा दुई चोटि प्रयोग गर्दछु, बिहान एक चोटि राम्रो सुरुवात गर्न र साँझमा अर्को मैले प्रशिक्षण सुरु गर्नु भन्दा पहिले मलाई चाहिने फोकस र उर्जा दिन। म यो मेरो नकारात्मक विचारहरु बाट छुटकारा पाउन, र प्रतिस्पर्धा को लागी मेरो पाठ्यक्रम कल्पना गर्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्दछु। म मेरो DAVID थियो जब म लिलेहैमर गएको थियो तर, म सिल्वी डाईगल र नाथली लेम्बर्टले मलाई पार गरिरहेको दृश्य हेरिरहेको थियो। मैले मेरो त्रुटि पहिचान गरेको छु र यसलाई सुधार गरेको छु। क्रिस्टिनले भनिन्, "अब म आफूलाई कुद्दै र जित्दै छु"।
मैले क्रिस्टिनलाई सोधें कि उनी कस्तो महसुस गर्छिन् यदि डेभिडमा ब्याट्रीहरू मरे भने उनी डराउँछिन्? “होइन, डेभिडसँग मैले आराम गर्न र दृश्यहरू सिकेको छु, यो अद्भुत सानो मेसिन हो तर, तपाईंले अझै आफ्नो भाग गर्नु पर्छ। यो कुनै चमत्कार होइन, मैले आफैंले पनि त्यस्तै अनुभूति प्राप्त गर्न सक्थें, तर म अल्छी छु र नतिजा एकदमै छिटो प्रमोदवनमा हुनेछु ”।
डिजिटल वरिष्ठ 'क्लासिक चैम्पियन
विक्टोरियाको लागि रकी रोड - थम्पसनले डिजिटल शीर्षकमा रोलहरू
गोर्डन, जो। बोस्टन हेराल्ड। सेप्टेम्बर १,, १ 16 1991 १
कन्कर्ड - १ 1960 s० को दशकमा, उनीहरूले रकी थम्पसनले कल एक LSD यात्रा गरे। उच्च-टेक १ 1990 400,000 ० को दशकमा, उनीहरूले यसलाई पीजीए यात्रा भन्छन् - Nas००,००० डलर डिजिटल सीनिअर्सको क्लासिक नाशावाटुक कन्ट्री क्लबमा विजेताको सर्कलमा। थम्पसनले हिजोको अन्तिम राउन्डमा 70० रन बनाए भने ११ अन्डर-पार २० 11 मा पुग्यो र जोडी दुबै ली ट्रेभिनो र ब्रुस क्रम्पटनले second२२ संयुक्त टुर इभेन्टमा आफ्नो दोस्रो टूर्नामेन्ट जितेर $ ,205०,००० पाउन्ड बनाए।
Om१ वर्षीय थम्पसनले त्यसपछि एउटा खुलासे गरे। उनले घोषणा गरे कि उनी हप्ताको अन्तरालमा ध्वनि-प्रकाश आराम गर्ने मेसिनमा राखिएका थिए र उपकरणले उनलाई आफ्नो शान्त रहन मद्दत गर्यो। मेसिनले काम गरेको होस् वा नहोस्, कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन जब उसले अन्तिम प्वालमा १० फिट भित्र पछाडि फ्याल्दा थोम्पसन एकदमै शान्त देखिन्थ्यो। यसले बार्डीको लागि डेड सेन्टर रोल गर्‍यो जसले क्र्याम्प्टनलाई १ स्ट्रोकको जीत दिलायो, ​​जसको--अन्डर-पार 51 10 थम्पसनले उनलाई under under अण्डरमा १० अन्डरमा बोर्डमा राखेका थिए, जसको मूल्य .$,००० थियो।
गार्टनर (थॉम्पसनको एक व्यवसाय साझेदार) ले मेसिनले कान र आँखाहरू ढाक्छ, आवाज बनाउँदछ र लुगा लगाउनेलाई र see्गहरू देखाउँदछ। थम्पसनले हेर्न चाहेको एक मात्र र green्ग हराएको थियो money 355,472$th,10२, मुद्रा सूचीमा १० औंमा। गार्टनरले भने कि मेसिन २० वर्षदेखि अनुसन्धान गरीएको छ र अल्फा, थेटा वा डेल्टा तरंगको चेतनामा ट्याप गर्दछ। उनले यसो गरे यसले अप्टिक स्नायु र श्रवण नहरलाई असर गर्छ र शिक्षा-अक्षम विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको छ। थम्पसन, जसले बर्डी पुट छोड्दा पुस नाच गर्थे, यसलाई साधारणतया "मो-चीन" भन्ने गर्थे र उनी अन्य टूर्नामेन्टमा भन्दा धेरै तनावमुक्त भएकोमा जोड दिए।
"त्यो मेशिनलाई आशिष दिनुहोस्," थम्पसनले भने। “म यस्तै परिस्थितिमा पहिले भन्दा धेरै आराम पाएको थिएँ; सामान्यतया मेरा हातहरू अलि कलिलो हुन्छन्, तर मैले पछाडि नौलाई देखें कि म पूर्ण रूपमा शान्त छु। यो अनौठो हो। ”
समाचार पत्र लेख: विक को लागी रक को शांति गर्न को लागी प्रयास
- शान्त, कूल, स ,्कलित, थम्पसनले ट्रेभिनो र क्र्याम्प्टनलाई बन्दुक दिए
मर्फी, टिम। गल्फ वर्ल्ड सेप्टेम्बर २०, १ 20 1991 १। पृ। 56
Concord, Mass - यदि गत आइतबार बिहान भिस्टा होटेलमा बिजुली चल्ती भएको भए, ब्रुस क्रम्प्टन डिजिटल वरिष्ठ क्लासिक च्याम्पियन हुन सक्थे। तर त्यहाँ थिएन, र ऊ छैन। मुकुट यसको सट्टा ह्यु डेलान थम्पसनको टाउकोमा टिकी छ,, ० को प्रकारको केटा जसले टुर्नामेन्ट क्वार्टरमा आफ्नो अन्तिम घण्टा सबै इलेक्ट्रोनिक रूपमा सही चीजहरू गर्यो।
बिहान :8: .० सम्म, रोकी थॉम्पसनले आफूलाई 30० मिनेट चिसि .्ग गर्नका लागि प्याराडाइज लाइट / साउन्ड मेशिन भनिन्छ। ली ट्रेभिनो र अल गिलबर्गरमा एक शटको बढ़त बचाउन नशाहटुक कन्ट्री क्लबको लागि प्रस्थान गर्नु अघि उनले एउटा कन्फरेक्टसनमा जोडिदिए। टाँको टेक्सासका मेयरले हप्ताको शुरुमा आराम गर्ने उपकरणमा रोकीको लामो समयका साथी, जोन गार्टरले पछि थट्टा वेभको बारेमा कुरा गरे, दिमागको गोलार्धलाई सन्तुलनमा राख्दै कसरी मेसिनले डाउन सिन्ड्रोम बच्चाहरू र सीख्ने अक्षमता भएका मानिसहरूलाई फाइदा पुर्‍यायो।